Kooxda AC Milan oo guul-darro ku bilowday Horyaalka Talyaaniga.
Monday September 01, 2008 - 13:50:34
..iyo Natiijooyinka guud ee Seria A-da.!!
Ciyaarihii Eursom oo si habsami ah uga socda magaalada Leicester!!
Monday September 01, 2008 - 13:44:10
Waxaa manta oo Axad ah weli ka socda magaalada Leicester ee wadanka Ingiriisaka qaybihii kala duwanaa ee ciyaarahii EuroSom.
Tababaraha Fatih Terim oo saxiisay heshiis kale oo laba sano ah .
Monday September 01, 2008 - 13:31:04
Sida uu ku soo waramayo saxafiga la yiraahdo Ian Ferris, tababaraha xulka qaranka wadanka Turkey Fatih Terim ayaa go'aan ku gaaray in uu xulkiisa wadanka Turkey uu sii leyliyo labada sano ee soo socota...
Massimo Oddo oo ku biiray kooxda Bayern Munich.!!
Monday September 01, 2008 - 13:24:17
Difaaca wadanka Talyaaniga Massimo Oddo ayaa goor dhaweyd waxuu si deyn ah ugu biiray kooxda K/cagta ee Bayern Munich ee wadan Germany, waxaana warka oo soo baxay saaka xaqiijiyay tababaraha koxoda Munich Jurgen Klinsmann.
Kooxda Valencia oo ka fiirsaneysa fasaxa David Villa.!!
Monday September 01, 2008 - 13:15:38
Wararka ka imaanaya xarunta naadiga Valencia ee wadanka Spain ayaa sheegay in kooxdu ay ka fiirsan doonto fasaxitaanka weeraryahankooda halista ah ee David Villa...